Ashtar Iwu - WRSP
1910 (March 10): George Van Tassel mụrụ.
1947: George Van Tassel kpọọrọ ezinụlọ ya gaa Giant Rock, California ebe ọ mepụtara obere ọdụ ụgbọ elu, ebe a na-azụ ndị ọbịa na ụlọ ahịa kọfị.
1948: George Van Tassel guzobere "hoodtù Brothermụnna nke Cosmic Christ."
1952: George Van Tassel guzobere "Ministry of Universal Wisdom".
1952 (July 18): George Van Tassel kwuru na ọ natara ozi telepathically zitere site na onye mba ọzọ aha ya bụ Ashtar.
1952: Robert Short kwalitere ozi Ashtar, guzobe Iwu Ashtar, ma kesaa Ashtar.
1953 (August 24): George Van Tassel kwupụtara na ọhụhụ anụ ahụ na ndị ọkachamara na ahụmịhe UFO.
1953: Robert Short kwuru na ya hụrụ mmechi anụ ahụ na ahụmịhe UFO.
1953-1977: George Van Tassel na-akwado mgbakọ nnukwu ụgbọ mmiri Giant Rock kwa afọ, yana ndị bịara dị ka 11,000.
1977: Thelma B. Terrill (Tuella) guzobere "Ashtar Galactic Command"
1978: George Van Tassel nwụrụ.
1982: E bipụtara Tuella Mkpochapụ World Project site na Ashtar Command ma dọọ ndị mmadụ aka na ntị na mkpochapụ nke mbara ala dị nso.
1986: Yvonne Cole dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka na mbibi nke ụwa ga-eme na 1994 na Ashtar Command ga-ewepụ ụwa.
1994: Ndị otu Ashtar Command kwuru na ahụmịhe "Mbuli elu" ahụ emeela ma kpụrụ ndị otu n'ime ụgbọ mmiri site na "mbufe anụ ahụ." A kpọrọ ihe omume a “Njem Ọsụ .zọ.”
A mụrụ George Van Tassel n'ezina ụlọ klas dị na Jefferson, Ohio na 1910. Mgbe ọ gụsịrị ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ọ kwagara California na 1930 ebe ọ rụrụ ọrụ dị ka igwe na oge. Ọ bụ ebe ahụ ka ọ zutere Frank Critzer, onye na-atụ egwu na-ebi na mbara ọzara California dị n'akụkụ nnukwu okwute asaa dị na Giant Rock. Na 1947, George Van Tassel kpọgara ezinụlọ ya na Giant Rock, California ebe ha bi n'ime ime ụlọ ndị dị n'okpuru Giant Rock nke Critzer gwupụtara mgbe ọ rụpụtara obere ọdụ ụgbọ elu, ebe a na-azụ ndị ọbịa na ụlọ ahịa kọfị. N'ebe a, n'ọzara dị nso na Ndagwurugwu Yucca, Van Tassel natara ozi site n'aka ndị na-ekweghị n'okike mgbe niile ma kwuo na ya achọtala "ezi onye" ya ma nwee ike ịnụ "olu dị n'ime" ya.
Van Tassel [Foto dị n'aka nri] bu ụzọ guzobe hoodtù hoodmụnna nke Cosmic Christ na 1948, wee jee Ozi nke Amamihe Universal na 1952. Ndị Brothermụnna nke Cosmic Christ bụ obere ìgwè na-ezukọ kwa izu na Giant Rock maka ntụgharị uche na nhazi oge. Malite n’afọ 1949, ihe ndị a na-anụ n’ọgbakọ ndị ahụ bụ nke e dere n ’ozi si n’aka“ Akara Aka Ọlaedo. ” Dị ka akọwara ndị otu ikpeazụ na akwụkwọ akụkọ 1968, Van Tassel na-ekwu nke ahụ
“Odi m ka m banye na mpaghara igwe ocha… N'ime nke a 'nke ọla edo', nke di ka enweghi oke ebe o no, anuru m olu di nwayo na ekwu okwu ndia. Ka m na-anụ okwu ndị a, a na-ewepụ ha na mkpirisi, ma ọ bụ na-etinyere ha, ka m na-ekwughachi ihe m nụrụ… Onye ọ bụla na-eche na nke a dị ka Chineke na-ekwu okwu n'ime onye mbụ. Enwere ike otua, a ga m agwa gị otu m si anata okwu wee dekọọ ya ”(Van Tassel 1968: 15).
Ntọala nke abụọ dabara na ozi Van Tassel kwuru na ha na-enweta telepathically bido na Jenụwarị 6, 1952 site na ndị nọ na mbara igwe (ihe na-efe efe) nke na-abịaru ụwa nso. Ministri nke Universal Wisdom kwalitere onwe ya dị ka ụlọ ọrụ nyocha sayensị nwere mmasị na "ahụmịhe UFO." Ọ bụ ezie na nyocha ya nyochakwara ma gbaa ume n'ụdị ọgwụgwọ ime mmụọ, isi ihe dị na ya bụ ịnakọta na nyochaa ozi metụtara ọrụ UFO.
Mkparịta ụka mbụ nke Van Tassel na Ashtar (“onye isi” ma ọ bụ onye isi nke ndị agha niile nọ n’etiti ndị ọzọ) bụ ndị a kọrọ na Julaị 18, 1952. Mkparịta ụka a nke mbụ abụghị ụdị ọdịnala nke ịkpọtụrụ ihu na ihu kama, Van Tassel kwuru na ọ nọ na-anata ihe telepathically na-ezipụ site na ngwaọrụ ndị ọzọ dị elu. Dị ka ụdị nke ESP, ọ na-ekwu na ya "na-atụgharị" na ozi ndị a na-ezigara nakwa na site na ịkwado uche ya na ahụ ya site na usoro ụfọdụ, gụnyere usoro ntụgharị uche, ọ nwere ike ịnọgide na-enwe mmekọrịta na ndị ọzọ. N'ime izu ụka ọ bụla kwa izu Fraịde, ọzụzụ, na ịlaghachi na Giant Rock, Van Tassel kụziiri ndị ọzọ usoro ọ na-eme ma gbaa ume ka ndị ọzọ na-ekwurịta okwu na-eche ụdị a nke telepathy.
Van Tassel gara n'ihu na-eziga ozi site na ọtụtụ oghere dị (dịka, Portla, Maxslow, Lax, Blaroc, Noot, Vela, wdg); n'agbanyeghị, e nyere ozi Ashtar ndị a ma ama dịka a na-ekwu na ha sitere na nke kachasị mkpa ma dị ike na-agagharị ụyọkọ kpakpando. Ozi mbu bu nke Van Tassel biputara na 1952 na akwukwo, Ana m agbafe ebe a na-efe efe: A gbara ihe omimi nke ndị na-efe efe . Ọ bụ ezie na akwụkwọ ahụ na-egosi na onye edemede ahụ na-agbafe na mmiri na-efe efe, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, akwụkwọ ahụ bụ nchịkọta nke ozi Van Tassel natara n'aka ndị mmadụ na mmiri na-efe efe.
Ka ọnwa nke asatọ dị na mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na asatọ n’afọ 24, Van Tassel kwuru na otu ugboelu dara n’ọdụ ụgbọelu dị na Giant Rock na ndị mbịarambịa 1953 kpọtụụrụ ya. O kwuru na flyin`g saucer bụ ụgbọ mmiri na-eme nke onye aha ya bụ "Solgonda" nke ezitere site n'ụgbọ mmiri buru ibu nke si Venus gaa Earth. Mgbe ọ nọ n'ụgbọ mmiri ọ na-ekwu na e nyere ya ozi na usoro iji wuo igwe oge (F = 1 / T). Dabere na kọntaktị a, na 1954, Van Tassel malitere iwu "Integratron" na ala ya na Giant Rock. [Foto dị n'aka nri] Integratron bụ nnukwu ụlọ nke nwere ọmalịcha, na mgbe emechara ya, n'etiti ihe ndị ọzọ kwenyere na ọ ga-agbanwe ndụ sel mmadụ ma mee ka ndụ mmadụ dị ogologo. Van Tassel welitere ego maka owuwu ahụ site na ịrịọ onyinye site na akwụkwọ ozi nke Ministry of Universal Wisdom na mmemme okwu ihu ọha. A nụrụ kepu kepu na Howard Hughes (onye na-eweburu Van Tassel) nyere nnukwu ọrụ ahụ.
N'ikwekọ na ahụmịhe kọntaktị UFO nke Van Tassel nke 1953, ọ malitere ịnakwere Mgbakọ Rockant Spacecraft kwa afọ (1953-1977), nke na-adọta ọtụtụ puku mmadụ. Ka ọ na-erule n’afọ 1955, mgbakọ UFO ndị e mere na Giant Rock na-adọtakarị “onye bụ onye” nke ndị na-akpọtụrụ UFO ugbu a, gụnyere Truman Beturum, Kenneth Arnold, George Adamski na Charles Laughead. Edere ndị bịara dị ka 11,000, na 1957, Magazin ndụ zitere onye na-ese foto Ralph Crane ka ọ kọọ ihe omume ahụ. E bipụtara May 27, 1957 dị ka akụkọ "Oge Nkụzi Maka Ndị Na-ahụ Maka acesgbọ Mmiri," isiokwu ahụ nyere ọtụtụ akụkọ sitere n'aka ndị bịara banyere nsogbu ET na njem ha na mbara ala na Mars, Venus, na Ọnwa. Isiokwu ahụ kwuru banyere Van Tassel na UFO ya na ihe omume ndị Truman Beturum, Ruth May Weber, na Howard Menger kọrọ (Magazin ndụ 1957: 117-18).
Dika otutu mmadu malitere igha Giant Rock mgbakọ, Van Tassel ghọrọ onye a ma ama ma kwuo okwu ugboro ugboro na redio na telivishọn na-akwalite nzute ya na UFOs, ahụmịhe kọntaktị UFO, na Ashtar. Dika Ashtar na Ashtar Command (okwu eji ako otutu ugbo galactic na aru oru iji chebe gala gala) di otutu, otutu ndi mmadu malitere ikwu na ha nwekwara ike iziga ozi site na Ashtar.
N'ihi ajụjụ banyere ezigbo ozi Ashtar Command, na ịkpọtụrụ ezigbo Ashtar, esemokwu malitere n'etiti Van Tassel na ndị ọzọ na-ezipụ ozi n'oge ahụ. Van Tassel kwalitere mmekọrịta ya na Ashtar dị ka ụdị telepathy na ihe nke sayensị kama dị ka omume ime mmụọ nke ịnyefe. Van Tassel ekwughị na ọ bụ naanị ya bụ Ashtar kpọtụrụ ma ọ na-akatọ ọtụtụ ndị gosipụtara ozi Ashtar, ọkachasị ndị Robert Short kwalitere. Dị ka Van Tassel si kwuo na 1952, “Inye onwe gị na ọgụgụ isi gị n'ịhụ n'anya ma ọ bụ Ìhè, na-akpata echiche na-enweghị isi na ịla azụ nke omume. Sayensị na ọnọdụ ime mmụọ bụ otu, ọ bụghị isiokwu kewara ekewa. Ashtar nke Ashtar Command bụ ezigbo mmadụ, àgwà a bụ ụdị nke Ashtar mbụ. ANN gaghị 'ọwa' ohere ọgụgụ isi. ”
Ka ọ na-erule ngwụsị nke 1952 enwere nkewa doro anya n'etiti Ministry of Universal Wisdom na Ashtar Command bidoro na Robert Short. [Foto dị n'aka nri] Short kwuru na ụdị ọwa ya mere mgbe mmadụ "hapụrụ ahụ ha ka ọgụgụ isi ọzọ wee nwee ike ịgwa ha okwu." Short kwukwara na ya nwere ike ịnata ozi ET site na ederede akpaka. N'akwụkwọ ya, N'ime Kpakpando: Ozi sitere na Extraterrestrials, otu n’ime ozi izizi Short azọrọ na ọ nwetara na 1950 si ET gwara ya ka ọ gaa Giant Rock, California wee chọta Van Tassel. A raara ọtụtụ n'ime akwụkwọ ahụ iji kọwaa ihe omume channeling ahụ mere na Van Tassel na ndị ọzọ ka ha kpọtụrụ ET. Nke a gụnyere iji obere ebili mmiri na redio HAM na ọbụna mgbasa ozi telivishọn. Dị ka Short malitere ịnata ozi site na Ashtar, otu n'ime ozi mbụ ya na-adọ aka ná ntị megide "ndị amụma ụgha na ndị ndu."
N'ime otu afọ ahụ, Ministry of Universal Wisdom mere ka o doo anya na Short adịghị akpọtụrụ Ashtar mbụ, na George Van Tassel adịghị mgbe ọ bụla na nzukọ Mr. Short. Iwu Ashtar kwusiri ike ọdịdị ime mmụọ nke dị n'etiti Ashtar na ụmụ mmadụ na site na 1955, ọtụtụ "ndị na-ajụ ase" na "psychics" malitere ịkwalite ozi. Tinyere njikọ nke mmụọ, ndị na-akpọtụrụ kọntaktị bidokwara na-enwe mkparịta ụka anụ ahụ ọzọ na-akọwa ụgbọ mmiri ndị nwere ohere, extraterrestrials, na ndụ na mbara ala ndị ọzọ gụnyere ọnwa, Venus, na Mars. Ka ọ dị ugbu a, Robert Short ekwuola na ọ na-emekọrịta ahụ ya na ndị mba ọzọ.
Mgbe esemokwu a gasịrị, Van Tassel kwupụtara ikike dị ukwuu iji nyochaa ozi yana ịkọtakwara ahụmịhe na-ekwu, sị: “Mgbe mụ na ụmụ nwoke anọ zutere na August 4, 24, ha nyere m ozi ha gwara m ka m jiri dị ka 'igodo' iji guzosie ike. Ma ọ bụ ekwentị, kọntaktị n'ọdịnihu "(Van Tassel 1953: 1957). Site na "igodo" a, Van Tassel ga-ekwenye ma ọ bụ gọnahụ na ndị mmadụ n'otu n'otu na-ezisa ozi nke ọma ma nwee ezigbo UFO zutere.
Ka Van Tassel gara n'ihu na-akwado Nnukwu Mgbakọ Nnukwu Ugwu Rock Giant, ọ gosipụtara n'ihu ọha nkwukọrịta telepathic ya na ndị mba ọzọ. Dị ka ihe atụ, n’afọ 1958, n’elu ikpo okwu nke ndị ọkà okwu ji ekwu okwu ná mgbakọ ahụ, o kwuru, sị: “Ugbu a, ònye ka m na-agwa? Ọfọn, onye ọzọ na-agbanye na! Gbanwee ya, EE NA-EGO NA-EME M! Ka anyi dozie onye ga-ekwu okwu n'abalia a!… AB KN M. Ana m ewetara unu ịhụnanya. ” Ka channeling ahụ gara n'ihu, Van Tassel kọwara ụdị efe efe Knut na-eji yana ọnọdụ ya (Bishop na Thomas 1999). N'agbanyeghị channeling ahụ, Van Tassel yiri ka ọ gbanweela nkuzi ya ka ọ lekwasị anya na ahụmịhe UFO dị ka ngosipụta anụ ahụ. N'akwụkwọ 1956 ya, N'ime ụwa a na ọzọ: Ihe akaebe nke oge a nke mmalite mmadụ na nlọghachi ya site na mmalite nke mmadụ, enweghị aha Ashtar. N'ezie, ọ nweghị akwụkwọ ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ mechara dee Van Tassel nke kwuru Ashtar ma ọ bụ Ashtar Command.
Ihe a na-akpọwanye bụ nkọwa Van Tassel nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ iji kwado nkwenkwe ya na ndị isi ala site na mbara igwe na-eso ụmụ mmadụ na-emekọrịta ihe ogologo oge. Ọ na-arụ ụka na ọ bụ nghọtahie mmadụ, dabere na ọdịbendị ha na ọkwa sayensị n'oge ahụ nke nyere echiche na ndị a bụ chi ma ọ bụ ndị mmụọ ozi.
“Abụ m otu onye anaghị eme ihe ọ bụla n'okpukpe. Naanị m na-anwa ịkọwa n'oge a ihe kpatara ndị nwere nkwenkwe ụgha n'oge ọzọ iji dee ihe omume ndị ahụ dịka ha maara nke ọma-mgbe ha na-aghọtaghị ihe sayensị kachasị njọ banyere ihe kpatara igwe ojii, ma ọ bụ corona nke ọkụ. Naanị m na-anwa ịkọwapụta ihe ndị mere mgbe ahụ, na nghọta nke ugbu a nke sayensị eletrik ugbu a. Ana m anwa igosiputa na sayensi bu eziokwu, kama ihe anakpo acho, nkwenkwe ugha… Anaghi agbanwe ihe obula akwukwo okpukpe na ekwu. Naanị m na-akọwa ihe kpatara ihe ịtụnanya ndị mmadụ na-aghọtaghị mgbe ahụ ”(Van Tassel 1976: 26).
N'agbanyeghị Van Tassel na-atụgharị uche ya maka ozi Ashtar, site na etiti afọ ndị 1950, Ashtar na echiche nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka iwu iwu galactic na-akwadebe iji chebe ma ọ bụ zọpụta ụmụ mmadụ site na ụwa amatala nke ọma n'ime otu UFO dị iche iche na mmegharị kọntaktị. Robert Short gara n'ihu na-akwalite ụdị ozi a, ọtụtụ ndị na-ajụ mmụọ na ndị otu ime mmụọ kwuru na Ashtar kpọtụrụ ha. Nke a gụnyere Richard Miller, Elouise Moeller, Oriakụ EP Hill, na Marian Hartill. Dị ka ọtụtụ n'ime ndị a na-etinye aka na mmegharị ụdị mmụọ, dị ka M Am Society, ọ bụghị ihe ijuanya na ozi ndị na-abịa site na Ashtar malitere ịgbanwee iji nwekwuo mmụọ. Agbanyeghị na afọ ndị 1950, ozi ndị ahụ gbadoro ụkwụ na nso nso nke ọtụtụ ụgbọ mbara igwe ga-abịa iji nyere ụmụ mmadụ aka ebe a.
Nkọwa mbụ na akụkọ banyere ozi Ashtar na-elekwasị anya na ntinye aka na mmepe sayensị na ụwa. N'ime ihe ndekọ akụkọ banyere Van Tassel, Robert Short, na ndị ọzọ, Ashtar gosipụtara dị ka anụ ahụ na njem dị adị n'ezie. Ọ bụ ọchịagha nke “ndị agha oghere jikọtara ọnụ,” nke ebugara na ọrụ interstellar ngwa ngwa iji zọpụta ụmụ mmadụ site na mmepe ya. Enwere ntakịrị asụsụ asụsụ ime mmụọ na ozi izizi, na-elekwasị anya na akụkụ nke teknụzụ nke ndị mmadụ toro eto, asụsụ ndị ha na-eji, usoro nke ndị Ashtar, na ozi pseudoscientific gbasara isi mmalite ike, oge nkwukọrịta, ụgbọ mmiri na mbara igwe na-eme n'ọdịnihu.
Dịka ọmụmaatụ, na 1955, Elouise Moeller si na Ashtar Command nyefee ajụjụ na azịza banyere ụgbọ mmiri ha, njem njem mbara igwe, ndụ mgbe ha nwụsịrị, na ndụ na Venus. O kwenyere na otu ụgbọ mmiri si na Ashtar Command ga-abịarute ụwa n'oge ọ bụla. Adelaide J. Brown zigara ozi na-akọwa ụdị ndị dị ndụ na mbara ala ndị ọzọ na mbara igwe na etu Ashtar ga-esi nye ozi gbasara iwulite mbara igwe nye onye ọkammụta n ’ụwa“ nke kachasị elu ”mgbe nke a gasị anyị ga-enwe ike ịga njem ndị ọzọ na mbara ala na-emekọ ihe.
Ka ozi ndị ahụ si Ashtar na-abawanye, enwere nnukwu atụmanya na ọtụtụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ na-agbadata n’ụwa iji nyere ụmụ mmadụ aka wee kwụsị agha, ụnwụ nri, nrụrụ aka gọọmentị, na ihe ndị yiri ya. Agbanyeghị Robert Short gara n'ihu na-akwalite ozi Ashtar, ọ bụghị onye isi otu ahụ. Dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ọtụtụ ndị na-azọrọ na ha na Ashtar nwere ezigbo mmekọrịta ma enwere ọtụtụ ozi na-emegiderịta onwe ha, ha niile na-ejedebe amụma na-emezughị banyere mbata Ashtar na mbara ala.
Na nsogbu ndị metụtara ọdịnaya nke ozi, enweghị ikike ọ bụla, yana ọbụlagodi Nkwado nke mmegharị ahụ, ịnyefe, Ashtar malitere ibelata ewu ewu na njedebe nke 1960s. Echiche niile nke Ashtar nwere ike furu efu n'oge ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ọrụ nke onye na-adọrọ adọrọ na-adọrọ adọrọ aha ya bụ Tuella (Thelma B. Terrill) na 1970s na 1980s. [Foto dị n'aka nri]
Ọ bụ ezie na Tuella si n'aka ndị isi ọdịnala a na-atụ anya na Ascended Masters (dịka, Saint Germain), o gosipụtara ozi na-aga n'ihu banyere ọrụ nke iwu Ashtar na ndị agha ndị ọzọ. Akwụkwọ ya abụọ kachasị ewu ewu, Mgbapụ Worldwa Projectwa (1982) na Ashtar: Tribtụ (1985), gosipụtara ozi zuru ezu ma sie ike banyere Ashtar na Galactic Command. N'akụkụ ka ukwuu, ozi mbụ ya gụnyere akụkọ akụkọ banyere agha dị n'etiti ndị agha na-adịghị mma na ndị ọjọọ, Ashtar na-egosipụtakwa nke ọma dị ka anụ ahụ nke na-enye iwu ka ụgbọ mbara igwe. Ka ozi Tuella na-etolite, Ashtar bụ “anụ ahụ na ọbara” nke na-aga n'ụzọ towa iji nyere aka kpọpụ ndị mmadụ ahọpụtara tupu mmalite mbibi apocalyptic zuru oke. N'ịkọwa ọdịdị ọdịdị ya, Tuella dere na Ashtar: Tribtụ (1985: 4):
Adị m ogologo ụkwụ asaa n’ogologo, nwere anya na-acha anụnụ anụnụ na ọdịdị ya na-acha ọcha. Anọ m ọsọ ọsọ ma na-ewere ya dịka onye ndu nwere nghọta na ọmịiko. A raara m onwe m nye ụkpụrụ na nkuzi nke Onye Anyị na-enwu enwu, na m na-anọchite Alaeze iri na abụọ na Nnukwu Ọchịchị Sun. Enweela m aha 'Ashtar' site na Utu Utu Uwa a ka m jiri ya na-akpo oku dika onye isi nke ndi agha Intergalactic na-eje ozi n'uwa a.
Mgbapụ Worldwa Projectwa, Kesara ọtụtụ ebe na 1970 tupu e bipụta ya na 1982 ma nọchite anya “ozi gọọmentị” mbụ nke Iwu Ashtar dị ka nke Tuella zipụrụ. N'adịghị ka ozi Van Tassel nke dọrọ ụwa aka na ntị site na nnwale nke bọmbụ hydrogen, a ga-ebibi Tuella na ọtụtụ ihe ndị dị ndụ n'ụwa ga-emebi site na "ọgba aghara na ndọta." E kwuru na ọgba aghara ndị a sitere na ọtụtụ puku afọ nke ike na-adịghị mma na-ewuli elu ikuku.
Tuella mepụtara akụkọ Ashtar iji tinye usoro nchịkwa dị mgbagwoju anya nke ike ndị ọzọ na mbara igwe na ọtụtụ nde mbara igwe, na-akwado ma na-akwadebe iwepụ ụmụ mmadụ na ụwa. Dị ka ozi ya si kwuo, ọ bụ naanị ụmụ mmadụ ndị dị njikere ige ntị Ashtar ma soro ndị agha ET rụọ ọrụ nke ọma ga-azọpụta. Ndị a hapụrụ ga-atachiri ọtụtụ afọ nke mkpagbu ma mesịakwa bibie ha. Mgbe ụwa gafere site na oge mbibi a, a ga-enyocha mbara ụwa ọzọ ma mepụta ya ka ndị na-alọghachi nwee ike ibi "n'ọgbọ ọlaedo".
Ka ụgbọ mmiri ndị ahụ e kwere na nkwa eruteghị, ozi Tuella malitere ịgbanwe site na enyemaka nkịtị site na enyemaka ime mmụọ na-apụ apụ site n'ebe dị anya. Mgbe amụma na-aga n'ihu na-ada ada, ozi Tuella nwere obere ọdịnaya gbasara UFO nkịtị ma na-ekwusiwanye ike banyere mmụọ nke nnwere onwe na ozizi okpukpe nke Ashtar. Dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ọ gbanwere Iwu Ashtar ka ọ bụrụ ụdị ọdịnala nke usoro theosophical. Ashtar mechara pụta dị ka “ọ malitere nke ukwuu na ụwa ndị dị elu, nke nwere ọfụma… hara nhatanha ma bụrụkwa nke karịrị ike karịrị ike nke Nna-ukwu Ascended.” Tuella malitere ime mgbanwe a ka o doo anya na akwukwo ya Lord Kuthumi: Ozi nke ụwa maka afọ iri na-abịanụ (1985), na-elekwasị anya na mkpa maka nzọpụta ime mmụọ karịa itinye aka na mba ọzọ. Obere oge tupu ọnwụ ya, Tuella bipụtara Ashtar: Na-ekpughe ihe nzuzo nzuzo nke ikike nke ìhè na ozi ime mmụọ ha na ụwa (1994) na olu ikpeazụ ya nke ozi ezitere, Akwụkwọ Ọhụrụ nke Mkpughe (1995), ebe ọ na-ewetara nsụgharị nke ọdịnihu, na-arụ ụka na agbụrụ mmadụ ga-arịgogo ma ọ bụ gbanwee gaa n'ụzọ ime mmụọ karịa ma ọ bụrụ na ọ ga-adị ndụ.
N'agbanyeghi ngbanwe nke Tuella site na nkpuchi nke ozo nke uwa rue nrigo ime mmuo nke mmadu rue uzo di elu, otutu ndi isi Ashtar gara n'ihu na ihe omuma UFO. Nke a mere ka e nwee nsogbu post-Tuella Ashtar Command nke nwere nsogbu. Ọbụna na mgbanwe Tuella gaa n'ụdị mgbanwe ime mmụọ, ọtụtụ ndị na-azọrọ na ọwa Ashtar gara n'ihu na-akwalite ndapụta nke mgbapụ nke ụwa, ọdịda nke UFO, na kọntaktị anụ ahụ dị ka akụkụ nke ozi ha.
Yvonne Cole, onye kesara Ashtar kemgbe 1986, dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka na mbibi nke ụwa ga-eme na 1994. Ntugharị ya kwalitere akụkụ nke ozi Ashtar, ma kwe ndị na-eso ụzọ nkwa na ha dị mkpa maka ọrụ intergalactic kpọmkwem mgbe ha mechara. ewepụ ya na ụwa. Ọrụ ndị a gụnyere ime dị ka ndị ndụmọdụ, ndị nnọchi anya gọọmentị na ndị na-eme udo n'etiti agbụrụ mba ọzọ na ụmụ mmadụ. O nyere nkọwa zuru ezu banyere ọdịdị nke ụgbọ mmiri Ashtar, ụdị dị iche iche nke mbara igwe na ndị ọbịa bụ akụkụ nke Ashtar Command, na ntuziaka zuru oke banyere "ịkwapụ ụwa."
Dika 1994 biara wee gawa ma odighi ala ozo mere, ozi ndi ahu mejuputara ka ha tinye ntuziaka maka ihe ekwesiri ile anya dika “ezi” nkwukọrịta Ashtar na ozi ndi ana-agwa site n’aka ndi ala ọzọ na-adighi nma ma obu ndi mo-ozi dara ada ka Ashtar buru ihe ojoo. Site na mmepe nke Intanet site na otu na 1990 na Usenet na IRC, mgbe ahụ na WWW na Ashtar.org na 1998, Ashtar Command gosipụtara ụdị nkuzi dị n'otu. Okwu nke amụma na-emezughị, ma ọ sitere na ozi Ashtar na 1950s ma ọ bụ 1990s ka nkewa dị ka ozi ezighi ezi nke ndị mmadụ na-adịghị mma nọ na mbara igwe nke nabatara "mgbasa ozi" ma duhie "ndị nnabata". Otu akụkọ dị mkpa mepụtara n'oge a nke kwuru na ọtụtụ ndị na-eto eto nke Ashtar Command agbaghaala ma na ha bụ n'ezie maka ọtụtụ ụbọchị ọdịda na-ezighị ezi e nyere na channelụ.
Dika ndi otu a malitere ichikota site na njikọ intaneti, atumatu nduzi iri na abuo ka emeputara ka ha buru oru dika iwu nke ndi Ashtar Command na ichikota usoro nkwenye dika ndi ndi ozo gha adi nma karie ozi ha. Ntuziaka ọhụrụ ahụ na-amata na e nwere ọtụtụ nde oghere mbara igwe mgbe niile gburugburu ụwa, mana na "ụgbọ mmiri ndị nchekwa" a agaghị etinye aka na ụwa ọ gwụla ma enwere agha ụwa nke atọ ma ọ bụ "mbibi astrophysical."
Ọ bụ ezie na e nwere nnukwu ihe owuwu iji belata akụkọ ahụ, na 1994, ma eleghị anya na-adaba na amụma na-ada ada nke mbupụta ọdịda ọdịda nke Cole kwuru, otu ndị Ashtar Command kwuru na ha nwere "ahụmịhe ahụ." Ndị otu a gwara site na netwọkụ Ashtar na ha nwetara "Njem Ọsụ ”zọ" ma buru ha banye na mbara igwe site na "mbufe anụ ahụ." Nke a gụnyere nghọta mmadụ (ma ọ bụ mgbe ụfọdụ "ahụ etheric") site na akụkụ nkịtị wee bufee ya na "ụgbọ mmiri ọkụ."
Ihe kariri mmadụ 250 sonyere na nke abụọ “Ahụmịhe ebuli-elu” site n’ụdị ntụgharị uche a na-eduzi. Mgbe ihe omume ahụ gasịrị, otu ahụ kwupụtara na emepeela ụzọ na-adịgide adịgide n'etiti ụwa na ụgbọ mmiri Ashtar Command nakwa na ndị otu ọ bụla nwere ike ime ka mkpọtụ ha bilie ka ebugharị ha. "Ahụmịhe ebuli-elu" gụnyere usoro usoro asatọ nke na-ekwughachi mantra ahụ: "AB AM m onye nlekọta nke Ìhè ahụ, M Bụrụ Lovehụnanya na-arụ ọrụ ebe a, na-akwado Ashtar Command. AB AM m raara onwe m nye Alaeze Chineke n’elu ụwa, mmekọrịta mmekọrịta mba ọzọ, na udo zuru ụwa ọnụ. ” Njem njem nke onye otu ahụ ga-eme n'oge ntụgharị uche ma ọ bụ ọbụna ọnọdụ ụra ma emesịa kpugheere onye ahụ n'ụdị ụfọdụ icheta.
Ka ndị ọsụ ụzọ ahụ gara n'ihu, otu ìgwè nke ndị Ashtar Command si Australia malitere ịdebanye akụkọ zuru ezu banyere oge ha nọ n'ụgbọ mmiri Ashtar. Ha kọwara ihe dịka ụgbọ nke ụgbọ mmiri, uwe ha yi, ebe obibi, na ozi ndị ọzọ gbasara njem ha. Ndị otu ọzọ bidoro zipụ ozi yiri nke ahụ n'ịntanetị, na-atụle ọrụ ha na ọrụ ha na Ashtar Command. A gbara ndị otu kwuru na ha enweghị ahụmị ahụ ume ka ha sonye, ​​na ụfọdụ ụfọdụ a gwara ha na a hụrụ ha n'ụgbọ mmiri, mana na ha amatachabeghị ihe omume ahụ.
Site n'ọtụtụ weebụsaịtị, usoro Ashtar Command na-aga n'ihu ịzụlite ma na-eweta ozi gbasara ndị mmadụ tozuru oke. Ọtụtụ saịtị dị mkpa maka mmegharị a gụnyere Ashtarcommandcrew.net, Ashtarcommand.org, Ashtar.galactic2.net, na Ashtar Command Tribe na Facebook.
Enwere isi ihe abuo na nkuzi na nkwenye Ashtar: ihe ndi ozo bu ihe mbu, na ihe ndi ozo Ashtar.
Na ozi mbu nke Van Tassel kwalitere, Ashtar ji oke nkpa banyere okwu mmepe na ule nke bombu hydrogen kwuru okwu. Dabere na ozi ndị ahụ, iwepụ ngwaọrụ ahụ ga-ebute mbibi mbibi nke ụwa yana akụkụ a nke ụyọkọ kpakpando. Imirikiti nkuzi n'oge ahụ lekwasịrị anya na nnukwu mkpa iji chekwaa ụwa ma kwadebe maka ọnọdụ ọpụpụ nwere ike iwe ma ọ bụrụ na ihe agaghị nke ọma. Na nkwukọrịta Van Tassel natara, e nyere ya ozi na ọ ga-agwa gọọmentị United States na mbọ iji kwụsị nnwale nke ngwa ọgụ a. Ozi mbụ nke Van Tassel zitere site na Ashtar na July 18, 1952 bipụtara n'akwụkwọ ahụ M Na-agba Otu ucgbọ Mmiri Na-efe efe dị ka ndị a (1952: 30-32):
Ekele diri unu ndi Shan, anam ekele gi na ihunanya na udo, amata m bu Ashtar, ngalaba quadra ndi isi, ebe nchekwa patcha Schare, atumatu nile, ebili mmiri nile. Ekele, site n'aka Kansụl nke ihe asaa ahụ, ewetara gị ebe a site n'ike mmụọ nsọ iji nyere mmadụ ibe gị aka. Unu bu mmadu efu ndi ozo puru ighota ihe mmadu ibe ha puru ighota. Nzube nke nzukọ a bụ, n'otu echiche, ịzọpụta ụmụ mmadụ n'aka ya. Afọ ole na ole gara aga oge gị, ndị ọkà mmụta sayensị nuklia gị banyere “Akwụkwọ Ihe Ọmụma”; ha chọpụtara otú e si agbawa atọm. Na-asọ oyi dịka nsonaazụ ya si pụta, na a ga-eji ike a mee ihe maka mbibi, ọ dịghị atụnyere nke nwere ike ịbụ. Anyị echeghị echiche banyere mgbawa ha nke plutonium na UR 235, ihe mmewere Uranium; atọm a bụ inert element. Otú ọ dị, anyị na-echegbu onwe ha na mgbalị ha na-agbawa hydrogen element. Ihe a bụ ndụ na - enye ndụ na ihe ise ndị ọzọ n’ikuku ị na - ekuru, n’ime mmiri ị na - a drinkụ, n’ihe mejupụtara anụ ahụ gị, hydrogen. Mgbalị ha n'ihe ọmụmụ sayensị enweela ihe ịga nke ọma ruo n'ókè nke na ha enweghị afọ ojuju ịdakwasị ikike nke ike karịrị nke ha ji eme ihe, ọ bụghị afọ ojuju na mbibi nke otu chi niile n'otu oge. Ha aghaghi inwe ihe ojoo karie, ha enwetala ya. Mgbe ha gbawara hydrogen atom, ha ga-emenyụ ndụ dị na mbara ala a. Ha ji usoro ha na-aghọtaghị. Ha na-ebibi ihe na-enye ndụ nke Creative ọgụgụ isi. Ozi anyị nye gị bụ nke a: ị ga-ebu ụzọ gwa gọọmenti gị ozi niile anyị zigara gị. Ga-arịọ ka gọọmentị gị kpọtụrụ mba ụwa niile ozugbo n'agbanyeghị agbanyeghị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọtụtụ n’ime ndị dibia bekee gị, nwere ọgụgụ isi n’onwe ha ajụla ịnwe ihe ọ bụla metụtara mgbawa nke atom atọm. Mgbawa nke atọm nke ihe na-adịghị arụ ọrụ na nke ihe dị ndụ bụ ihe abụọ dị iche. Anyị anaghị eche banyere mkpebi ha kpachaara anya mee iji kpochapụ mmadụ ma mee ka ụwa a bụrụ cinder. Materialhụ ihe onwunwe n'anya ga-ekwenyeghị na mbọ anyị na-agba ịdọ ụmụ mmadụ aka ná ntị. Obi sie gị ike na ha ga-akwụsị ịgbawa atọm na-enye ndụ, ma ọ bụ anyị ga-ewepụ ọrụ niile metụtara ya. Ọrụ anyị bụ udo, mana ọnọdụ a mere tupu ọ bụrụ na usoro mbara igwe a na Lucifer, dọwara adọwa. Anyị ekpebisie ike na ọ gaghị eme ọzọ. Gọọmentị ndị dị na mbara ala Shan ekwenyela na anyị nwere ọgụgụ isi dị elu, ha ga-ekwenye na anyị nwere ikike ka elu. Anyị ekwesịghị ịbanye n’ụlọ ha ka anyị mata ihe ha na-eme. Anyị nwere usoro ha ga-achọ iji. Ebughị ya maka mbibi. Ebumnuche gị ebe a bụ iji wuo nnabata nke anyị nwere ike ikwurịta okwu na ụwa gị, n'ihi na site na mma nke atọm atom atọm, anyị na-agagharị ụwa gị. Nye gọọmentị gị na ndị gị na site na ha n'aka gọọmentị niile na mmadụ niile nọ na mbara ala Shan, nara ịdọ aka na ntị dịka ngọzi na mmadụ ga-adị ndụ. Ìhè m, anyị ga-anọgide na-akpọtụrụ ebe a na cone nke nnabata.
Mgbalị Van Tassel ime ka ndị ọchịchị America gbuo ndị ntị chiri, ọ bụrụgodi na ọ ruru ha ọlị. Ọjụjụ gọọmentị jụrụ itinye aka na Van Tassel na ozi ndị ọ na-ezipụta site na Ashtar mere ka esemokwu dị n'etiti ozi ndị sochiri akụkọ na-emepe emepe nke na-ese gọọmentị dị ka ndị agha na ndị ajọ omume. Ka Van Tassel gara n'ihu na-ezisa ozi, a na-ele Ashtar anya dị ka ikike nnwere onwe nke na-emegide onwe ya na oghere ndị na-adịghị mma na-emetụta ụwa na ndị bi na ya. N'agbanyeghị esemokwu a, e gosipụtara ndị agha Ashtar dị ka ndị ka ndị ọzọ ike karịa n'ụyọkọ kpakpando, ma hà nọ n'ụwa ebe a ma ọ bụ na-abịa site na mbara igwe. Na August 1, 1952, ozi sitere n'aka Van Tassel malitere dị ka ndị a (1952: 33-34):
Mgbalị anyị bụ ihe kpatara udo, ezi udo. Otutu ndi ikike gi di elu na mba nile nke uwa Shan amataghi nghota nile nke okwu a, udo, nihi na ha no n’okpuru ikike nke ochichiri. Echiche mbụ nke batara n’ime ndị nọ n’ọchịchịrị a abụghị ịchọpụta ihe ọzọ nke nleta anyị bụ, kama ọ bụ ibibi anyị, ịchọpụta ihe e jiri anyị mee. Anyị nwere ike ikwenye gị na mbọ ha niile, nke ejiri ihe ebibi emebi, agaghị abara ha uru ọ bụla. Ndị ahụ e kenyere ha na mmadụ efu n’anwụ dị elu na mbara ala Shan, ọ masịrị ya. Anyị achọghị ịme ihe ngosi mana m ga-agwa gị na ọ bụrụ na ndị mmegide, nke mmadụ ma ọ bụ nke ọzọ, nọgidesiri ike na mbọ ha, anyị nwere ike itinye nkeji 100,000 nke abụọ n'ọrụ. Ihere ga-eme ha iji mepụta ụgbọ elu igwe na ọnụego ahụ. Maka mmadụ ole na ole ndị na-adịghị atụgharị uche ha, ndị sayensị, a ga m agwa gị na ụgbọ mmiri anyị enweghị ike ịhụ anya nke ndị Shan ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ihe ndị dị na mbara igwe gị. Uche ole na ole nwere nghọta ga-aghọta nke ahụ. O siri ike ime otu ihe kpatara onye furu efu ihe niile. Ọ na-esiri onye ọ bụla ike ịghọta ọgụgụ isi dị elu n'ọtụtụ ọkwa, ha anọpụwo ya ogologo oge. M ga-agwakwa gọọmentị gị banyere mba a na ozi e zigara na ọgụgụ isi, bufere ndị mba ọzọ site na ụlọ ọrụ ha. Na udo nke karịrị nghọta nke mmadụ efu, anyị ga anọnyere gị, Abụ m Ashtar, onye isi, ọdụ Schare.
Ozi mbu ndi a na egosiputa uzo ego nke Van Tassel na Ministry of Universal Wisdom lere ndi ozo. Ozi juputara na jargon teknuzu na ozi pseudoscientific. E gosipụtara Ashtar na ikike ndị soro ya n'ụwa dịka ndị sayensị dị elu dị njikere ịkọrọ ndị họọrọ ige ntị ihe ọmụma dị elu. Ozi sitere n'aka Ashtar na August 15, 1952 gosipụtara nkwenkwe a:
Ntọhapụ nke hydrogen a n’efu na mbara ikuku nke ụwa a, ga-eme ka ire-ọkụ rie ọtụtụ akụkụ nke ụwa a nwa oge. Ndị nwere ikike, na gọọmentị, na-eburu ibu ọrụ, ọ bụghị naanị maka ndị bi na mbara ala a, mana ezinụlọ nke aka ha, ndị nwunye ha, ụmụaka, nne na nna na ndị ikwu ha bụkwa ọrụ ha, n'ihi na ndị a hụrụ n'anya agaghị agbanahụ. gị na ikike, nke gọọmentị nke ụwa, chee echiche ugboro abụọ ma ọ bụrụ na ndị ị hụrụ n'anya ga-anọnyere gị. Gwa ndi dibia bekee, juo ha maka udi onodu uzo oyibo. Ha ga-agwa gị, ma ọ bụrụ na ha na-ekwu eziokwu na ndị na-adịghị emetụta n'ụzọ ndị ọzọ, site n'ike nke ọchịchịrị, na nke a bụ eziokwu. Teta, gị onye ga-ekwere naanị ndị na-eduzi gị. Guzo n'ihu ndị mmadụ. Gwa ndị na-emetụta mkpebi uche gị, na ha sokwa. Na ìhè nke ịhụnanya, m na-ebunye gị osisi na-aga n'ihu ebe a, site na ventla nke edobere na ngwakọta a nke nnabata na ọkwa 72,000 dị elu karịa gị, karịrị ụdị ọnyà ọ bụla. Aga m alaghachi, ịhụnanya m, abụ m Ashtar (1952: 36-37).
N'agbanyeghị mbọ na nchegbu doro anya nke Van Tassel na Mịnịsta, gọọmentị United States gbawara bọmbụ mbụ hydrogen na November 1, 1952. Russia gbasoro ma nwalee bọmbụ Hydrogen ka ibu na Siberia na 1953. N'agbanyeghị amụma Ashtar dara banyere mbibi nke akụkụ ụyọkọ kpakpando a ma ọ bụrụ na ọ ga-agbapụ bọmbụ ahụ, ozi ndị ahụ a gara n'ihu gara n'ihu. Agbanyeghị, enwere nnukwu mgbanwe nke na - arụ ụka ugbu a na ndị agha Ashtar nwere ọrụ maka inyere mbara ala na ụyọkọ kpakpando ahụ ka ọ ghara ịnwụ na mgbawa ahụ ma ọ bụ naanị site na ikike ndị dị elu na ntinye aka nke mbara igwe nke ndụ gara n'ihu na ụwa a. N'ezie, ndị agha Ashtar nọ na-arụsi ọrụ ike ugbu a na-enyere aka idozi mmebi nke bọmbụ ndị ahụ mebiri, na oghere dị iji wepụ ụwa ma ọ bụrụ na mkpa bilitere. Ozi ndị ọzọ sitere na Ashtar nke Van Tassel bipụtara na M Na-agba Otu ucgbọ Mmiri Na-efe efe:
Abụ m Ashar, onye na-achịkwa Vela Quadra mpaghara, ọdụ Schare. Dị ka anyị gwara gị, ụlọ ọrụ anyị enyela ikike obere ngalaba 3 n'ime ihe dị iche na mbara ala gị Shan. Lọ ọrụ ndị a ugbu a nọ n'ọnọdụ ịhapụ otu narị puku ventalas ọ bụla. Centerlọ ọrụ anyị na-agwa m ka m gwa gị na ị na-achọ ịhụ ojiji nke ngwa agha atọm na agha. A na-arịọ m ka m nye gị ekele anyị maka ijigide ịma jijiji a. Na Light of True Love and Peace, Abụ m Ashtar (1953: 46).
Toonụ n'ịhụnanya na udo. Abụ m Ashtar, Commandant Vela Quadra mpaghara, ọdụ Schare. Nụrịrị ikike ikike nke Schonling Lord Chineke nke mpaghara nke 3 nyere, maka ikike anyị iji dozie usoro. Anyị na-achọ ịkpụ ọkụ ọkụ dị n'akụkụ mbara ala Shan iji mee ka ụwa gị kwụsie ike. Mgbalị a chọrọ ikike nke njikọ 86, na ebili mmiri 9100, nke 236,000 ventlas. Ọ baghị uru ikwu na vortices a ga - eme nnukwu mmebi iji gbochie nsogbu adịghị mma mmadụ kere na Shan. Ebe etiti anyị na ịhụnanya gị na ngọzi gị. Ìhè m, Abụ m Ashtar (1953: 46-47).
Ekele na ịhụnanya na udo, Abụ m Ashtar, mpaghara Vela Quadra, ọdụ Schare, Onye isi. Anyị chọrọ ịkụziri gị ịkwadebe maka nsogbu ime ihe ike nke Shan. Anyị na-enwe ihe mbụ anyị gosipụtara na ọ ga-aga nke ọma ijide mmụọ nke Shan. Lovehụnanya m, Abụ m Ashtar (1953: 47).
Ekele m na Ìhè nke ịhụnanya na udo, abụ m Ashtar, Onye isi, ngalaba Vela Quadra, ọdụ Schare. Nnyocha anyị banyere usoro mbara igwe nke lonlọ Mmanya na-egosi na mbara ala ndị ọzọ nke usoro ihe a emebeghị site na omume nke ndị mmadụ na mbara ala Shan. Ga-anọgide na-ahụ ọnọdụ ihu igwe dị iche iche. Ọtụtụ n'ime ventlas si na ọdụ ụgbọ mmiri guzobere n'akụkụ ụwa gị ga-arụsi ọrụ ike na ikuku gị n'ọnwa Eprel na Septemba. A na-agwa m ka m bulie ekele na ekele site n'aka gị site na etiti anyị. Ìhè m na ịhụnanya m, Ashtar (1953: 47).
Ka oge na-aga, ozi nọgidere na-adọ ndị mmadụ aka na ntị banyere ọdachi na-abịanụ. Van Tassel buru amụma banyere nsogbu ma ọ bụ agha, ihu igwe dị egwu, ala ọma jijiji, na mgbanwe mgbakwasị ụkwụ. Iji gwa ndị otu a ihe ọmụma a, Van Tassel bipụtara otu akwụkwọ akụkọ kwa afọ a na-akpọ “Proceedings of the College of Universal Wisdom.” N'ime “ihe omume” Van Tassel katọrọ gọọmentị, gosipụta ozi sayensị ọhụụ na akwụkwọ ọhụụ, rụrụ ụka na UFO nọ na-akpakọrịta na Earthlings, ma na-aga n'ihu igosipụta ozi ndị a na-ezigara Ọtụtụ mbipụta nke Proceedings malitere ozi sitere n'aka Van Tassel si "The Golden Destiny." Otú ọ dị, ka ọ na-erule ngwụsị 1953, ekwughi Ashtar na Ashtar Command na akwụkwọ akụkọ ahụ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị mmụọ na channelers gosipụtara ozi sitere na Ashtar n'ime afọ iri na-abịanụ, ozi ndị Tuella (Thelma B. Terrill) gosipụtara na 1970s na 1980s nwetara mmata kachasị mma. N'ịtụgharịghachi ozi nke mbụ Tuella, na-ezipụ Ashtar kwuru, sị, "Ozi ndị gara aga, yana nke ugbu a, na-ebu otu ibu nke nchegbu maka ụdị mmadụ. Anyị anaghị agbanwe nchegbu anyị ka oge na-aga. Oku nke afọ iri abụọ ma ọ bụ iri atọ gara aga dị ka ọ dị taa. Ozi anyị achọtala ndị na-anabata ndị ọzọ n'oge a n'ihi mgbanwe na-aga n'ihu. Ka o sina dị, mkpa ha dị oké mkpa n'oge a - ọ bụghị naanị maka mmesi ike ọzọ, mana maka ọdịmma nke ndị nwere ike ọ hụbeghị ha ma ọlị "(1985: 5).
Ozi mbu sitere na Tuella lekwasịrị anya na mbupu nke uwa site n'aka Ashtar na iwu Ashtar.
Anyị nwere ọtụtụ nde ụgbọ mmiri na-anọ na mbara igwe dị n'elu mbara ala gị, dị njikere iwepụ gị ozugbo na ịdọ aka ná ntị mbụ nke mmalite Planet gị iji wụkwasị ya. Mgbe nke a mere, anyị nwere naanị obere oge iji bulie gị elu tupu oke ebili mmiri ga - eme ka akụkụ mmiri gị dị elu - ikekwe kilomita ise ma ọ bụ karịa! Ha ga-ekpuchi ọtụtụ ala gị! Ebili mmiri a ga-eme ka ala ọma jijiji na ugwu mgbawa pụta ma mee ka kọntinent gị kewaa ma mikpuo na ebe ma mee ka ndị ọzọ bilie.
Anyị nwere ahụmịhe na mkpụpụ nke ndị bi na mbara ala! Nke a abụghị ihe ọhụụ maka Galactic Fleet! Anyị na-atụ anya ka anyị mechaa mkpọpụ na Earth nke Mkpụrụ Obi nke Ìhè n'ime nkeji iri na ise - ọ bụ ezie na ha nwere ọnụ ọgụgụ dị oke ọnụ. Anyị ga-ebu ụzọ napụta mkpụrụ obi nke Ìhè. Na nnukwu kọmputa anyị dị na mbara igwe anyị echekwala echiche ọ bụla, omume ọ bụla ị mere na ndụ a na ndụ gara aga. Anyị na kọmputa na-ekpochi n'elu ndị na-achịkọta ebe ị Mkpụrụ Obi nke Ìhè dị. Na ihe mbu gosiputara na odi nkpa, komputa anyi gha agbachi ebe nkpuru obi ndia no ebe ha no!
Mgbe a kpọpụsịrị Mkpụrụ Obi nke Ìhè, mgbe ahụ ka a ga-ebuli ụmụaka. Mụaka ahụ etolitebeghị ịza ajụjụ, ya mere, a ga-ebuga ha n'ụgbọ mmiri pụrụ iche ka ha lekọta ruo mgbe ha ga-esoghachi nne na nna ha. A ga - enwe ndị a zụrụ azụ pụrụ iche maka nsogbu ha. Ọtụtụ nwere ike ihi ụra ruo nwa oge iji nyere ha aka ịkwụsị ụjọ na nchegbu ha. Kọmputa anyị dị oke nkọ - karịa ihe ọ bụla ejirila rụọ ọrụ n'ụwa n'oge a - na ha nwere ike ịchọta ndị nne na ndị nna nke ụmụaka ebe ọ bụla ha nọ wee gwa ha nchekwa ha. Emehiela, a ga-ebuli ụmụ gị gaa na nchekwa n'oge Nnukwu Mbupụ.
Mgbe a kpọpụrụ ụmụaka, a ga-akpọ ndị niile fọdụrụnụ na Planet ka ha sonyere anyị. Agbanyeghị, nke a ga - abụ naanị obere oge - ikekwe naanị nkeji iri na ise. O doro anya na ịnwe ohere zuru oke n'ụgbọ mmiri maka gị, mana n'ihi na ikuku n'oge a ga-ejupụta n'ọkụ, irighiri ihe na-efe efe, anwụrụ na-egbu egbu, na n'ihi na a ga-echebara mpaghara ndọta nke ụwa gị, anyị ga hapụ ikuku gị ngwa ngwa ma ọ bụ na anyị, ya na ụgbọ mmiri anyị, ga-ala n'iyi.
Ya mere, onye na-erute ebe ị ga - ebuli ụzọ ga - ebuli ya elu. Oge ọ bụla ị na-ala azụ ga-apụta na njedebe nke ịdị adị nke Atọ gị nke ị kpọrọ Ahụ Ahụ. (Tuella 1985: 52-56).
Ka ụgbọ mmiri ndị ahụ e kwere na nkwa eruteghị, ozi Tuella malitere ịgbanwe site na enyemaka nkịtị site na enyemaka ime mmụọ na-apụ apụ site n'ebe dị anya. Obere oge tupu ọnwụ ya, Tuella bipụtara Ashtar: Na-ekpughe ihe nzuzo nzuzo nke ikike nke ìhè na ozi ime mmụọ ha na ụwa (1994) na olu ikpeazụ ya nke ozi ezitere, Akwụkwọ Ọhụrụ nke Mkpughe (1995), ebe ọ na-ewetara nsụgharị nke ọdịnihu, na-arụ ụka na agbụrụ mmadụ ga-arịgogo ma ọ bụ gbanwee gaa n'ụzọ ime mmụọ karịa ma ọ bụrụ na ọ ga-adị ndụ. Mbido ya na ihe 1995, “Ndị a bụ ozi ndị a na-ezigara na iwu ọhụrụ ndị sitere na ocheeze nke Nna nke Eluigwe gbasara atụmatụ nke ọrụ zuru ụwa ọnụ nke ga-akpali Onye Ọchịchị Ọ bụla. Akụkụ ọmụma a na-enye ihe ọmụma ga-ewebata ebe Agba Ọhụrụ hapụ ma tinyekwa uche mmadụ na akụkụ nke ọrụ Nna ahụ nke enyereghị Jọn onyeozi ide banyere ya. ”
Ka ọ na-erule afọ ndị 1990, egosiri Ashtar dị ka onye dị nsọ na Jizọs Kraịst. [Foto dị n'aka nri] Dịka akụkụ nke ụkpụrụ nduzi site na Ashtar Command iji mee ka ozi ndị na-abịa site n'aka ndị ọrụ ntanetị dị iche iche dị n'otu, a na-etinye usoro nke na-amata ọdịdị Chukwu nke Ashtar na Ashtar Command:
Lord Ashtar bụ onye rịgoro, Anwụghị anwụ na “Nna-ukwu nke Kraịst.” Ọ bụ agbụrụ nke Adam Kadmon HU-Man ma bụrụkwa ụzọ ndụ nke “nwa” nke onye maara dịka Lord Sananda (Jesus) na onye ibe ya dị nsọ ma ọ bụ ejima-ọkụ, onye makwaara dị ka Lord Michael… nke agwakọta agwakọta nke koodu ọkụ ha na Essences (site na www.Ashtar.org webụsaịtị nke ndị otu ji arụ ọrụ site na 1998 ruo 2005).
Ọ bụ ezie na nkuzi na ozi a na-elekwasị anya ugbu a na Ashtar nke mmụọ ma ọ bụ nke karịrị mmụọ, "Pioneer Voyage" na "Ahụmịhe Ebumnuche" ghọrọ ihe dị mkpa nke njem ahụ mgbe 1994. Ndị otu ahụ kwenyere na ha nwere ike ibikọ ọnụ Ugbo ala na itinye aka na Ashtar Command ọbụna mgbe ha nọ n'ụwa ebe a. Site n'ụdị ntụgharị uche na-eduzi na mantra a kapịrị ọnụ, a na-akuziri ndị otu na ha nwere ike ịnwe "ntụgharị ntụgharị nke anụ ahụ" ma gaa n'ihu, nwee mkparịta ụka bara uru na Ashtar.
Otutu emume ndi ozo nke Ashtar Command lekwasiri anya n'inyefe ozi ndi ozo. George Van Tassel bu ụzọ kwalite ụdị mgbasa ozi na telepathy. Na mbu, ya na Thetù ofmụnna nke Cosmic Christ, a na-enwe nzukọ izu kwa izu n'ime ụlọ n'okpuru nnukwu okwute dị na Giant Rock. N'oge ihe omume ndị a, e chere na ndị otu nwere ike ịbanye na ọnọdụ ntụgharị uche / ọhụụ ebe ha "gbaghaara" ugboro ole ndị mmadụ na-ezipụ ozi ahụ. E gosipụtara ọrụ a dị ka usoro sayensị nke nyere "onye nnata" ikike ịnabata na ịnata ozi a na-agbasa. Ọ dịghị ET ma ọ bụ Ashtar jidere ha ma ọ bụ nweta ha, kama ha hụrụ na ha nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ndị na-ebugharị ozi pụrụ iche, ọ dịghị ihe ọzọ. Ka Robert Short malitere ịkwalite ozi Ashtar na Ashtar Command, ịnyefe Ashtar bịara n'ụdị nkwurịta okwu na ịjụ ajụ. Ọ bụ ezie na Short ga-eji teknụzụ dị ka redio HAM na akara ngosi telivishọn iji nweta ozi sitere na Ashtar na ET, ihe ka ọtụtụ n'ime ememe ndị metụtara iso Ashtar na-ekwurịta okwu mere site n'ụdị usoro na ịde ederede. Omume emume a ghọtara na onye na-ezipụ ozi ahụ bụ arịa nke ET na "ndị nwere ìhè dị elu" ga-esi nwee ike ikwurịta okwu. Dị ka a pụrụ isi kwuo ya, onye na-ezipụ ozi ahụ ghọrọ onye na-anabata ihe maka ndị dị elu na ikike. Typedị channeling a bụ ihe megidere ihe Van Tassel kwalitere.
Ka mmegharị ahụ malitere, ọrụ ememme ọzọ dị mkpa bụ mgbakọ mbara igwe a na-eme kwa afọ na nnukwu ihe onwunwe Giant Rock nke Van Tassel dere. N'oge ihe omume ndị a, ọtụtụ puku mmadụ ga-aga n'ọzara ịkọrọ akụkọ UFO, chọọ UFO, nụ ndị kọntaktị a ma ama na-akọghachi ahụmịhe ha, zụta ihe ncheta UFO na ebe a ndị dị ka Van Tassel na-ekwupụta ozi ET. Na 1957, Life Magazine zigara onye na-ese foto Ralph Crane ka ọ bịa kọọ ihe omume ahụ. E bipụtara May 27, 1957 dị ka akụkọ "Oge Nkụzi Maka Ndị Na-ahụ Maka acesgbọ Mmiri," isiokwu ahụ nyere ọtụtụ akụkọ sitere n'aka ndị bịara banyere nsogbu ET na njem ha na mbara ala na Mars, Venus, na ọnwa. Isiokwu ahụ kwuru banyere Van Tassel na UFO ya na ihe omume ndị Truman Beturum, Ruth May Weber, na Howard Menger kwuru (1957: 117-18).
Dika mmeghari ahu malitere na 1990 ka ndi otu guzobere ememe ohuru nke ndi ghotara uzo njem njem astral / etheric ma obu nro di nma nke nyere ndi mmadu ohere inweta ndu n'ime ugbo ET. A na - akpọ ndị otu "Ahụmịhe ebuli elu" ka ha nwee ike ịtụgharị uche na ntụgharị uche nke nyere ha ohere ịnwe "ntụgharị ahụ." N'ime omume a, ndị otu na-azọrọ na ha nọ n'ụgbọ mbara igwe na-arụ ọrụ dị mkpa maka Iwu Ashtar.
Usoro nkwenkwe metụtara Ashtar Command adaberewo n'ọtụtụ ọnụ ọgụgụ mara mma nke kwuru na ha nwere ikike ịnyefe ozi sitere na Ashtar. Agbanyeghị na a ga-amata ndị isi a dị ka ndị ọchịchị, ọ ga-abụrịrị na ndị isi nke otu ọ bụla ga-ahụ ha. Kama nke ahụ, a na-akpọ onye isi nchịkwa Ashtar Command na Ashtar, na ndị na-ezi ozi ya ga-ahụ dị ka ndị dị mkpa mana ọ bụghị na-elekọta ọrụ ET ma ọ bụ Ashtar Command. Fọdụ n'ime ndị isi bụ Ashtar bụ George Van Tassel, Robert Short, Thelma Terrill (Tuella), na Yvonne Cole.
Dika ihe omuma nke sayensi banyere mbara ala di na mbara igwe, o putara ihe na o nweghi obodo ndi ozo bi na Mars, Venus, ma obu onwa. Nke a gbara ọtụtụ ozi izizi ozi gara aga nke kọwara ihe ndị dị ka obodo ndị mepere emepe na Mars, ntọala oghere dị na ọnwa, na ụdị ubi Babilọn dị na Venus. Dịka ụfọdụ ozi gbanwere iji kọwaa ndị dị na mbara ala ndị ọzọ dị ka mmụọ, mmụọ ma ọ bụ ụwa ọzọ, akụkọ metụtara Ashtar dị ka anụ ahụ na-achịkwa UFO nkịtị gbanwere. Fọdụ dị ka Van Tassel, jigidere akụkụ ahụ nke ET ma rụọ ụka na gọọmentị America gbara izu ma na ihe ọmụma gbasara ntọala na ọnwa ka ezoro ezo n'ihu ọha. Van Tassel kwuru ihe ndị a:
Gassendi ndagwurugwu nwere ntọala ọnwa na gọọmentị marala kemgbe 1954 na ntọala a nọ na ọnwa ruo ọtụtụ puku afọ. Gọọmentị America na-efe ụgbọ mmiri mgbochi ike ndọda kemgbe 1956. Gọọmentị America na-ekpuchi ozi gbasara ọrụ ọbịa dị iche iche na Mars kemgbe afọ 1960. (Ajụjụ ọnụ George Van Tassel 1964)
Mwakpo nke President Kennedy, Mairtin Luther King, Malcom X, na Robert Kennedy "ha niile nwere njikọta na iwu niile. Egburu ha ma ọ bụ n'ihi na ha nọ n'ụzọ mmadụ, ma ọ bụ iji mepụta ihe kpatara ọdịnihu "(Van Tassel 1968: 9).
Nnukwu Pyramid nke Gizeh, [sp] Egypt, bụ naanị ụlọ dị ugbu a na ụwa nke na-adịgide ka 25,816 afọ gasịrị. Ọ bụ osisi kachasị ike ọ bụla ewuru na mbara ala a. N'oge ojiji ya ọ nwere ike inye ike karịa ndị na-enye ọkụ na Niagara Falls nwere ike mepụta n'ime otu puku afọ (Van Tassell 1972: 9).
Otu n’ime esemokwu nke ozi Van Tassel bụ nkọwa ya banyere Akwụkwọ Nsọ. Ọ bụ ezie na ụdị nyocha a bụ ihe a na-ahụkarị ugbu a, ebe Erich von Daniken mere ka ọ bụrụ onye ama ama n'akwụkwọ ya Chariot of the Gods? (1968) ma emesia ndi otu UFO ndi ozo dika Raelian Movement kwalitere na 1970s, na 1950s o kere esemokwu. Van Tassel kwenyere na Bible nwere ezi ozi gbasara ọrụ ET n'elu ụwa, ozi nke ndị isi okpukpe ahụ kọwaara ma kọwaahie ya n'oge ahụ.
Ọ tụgharịrị amaokwu ndị dị na Akwụkwọ Nsọ iji rụọ ụka na a kụrụ ụmụ mmadụ n'ụwa ebe a, na ndị izizi mbụ na-aga ụwa na mbara igwe bụ nwoke ma ha na "Eve" bụ onye "ụdị anụ ọhịa kachasị elu n'ụwa." Ọ rụrụ ụka na Jizọs bụ onye si na mbara igwe nke wepụtara onwe ya ịbịa ebe a iji nyere ụmụ mmadụ aka ịgbanwe. O kwenyere na Jizọs anwụghị n'oge a kpọgidere ya n'obe kama na "ewere ya na transistor." Meri (Nne Jizọs) sikwa na mbara igwe pụta, na ndị amamihe atọ ahụ sochiri Kpakpando nke Betlehem ka ezitere site na mbara igwe iji lekọta ọmụmụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ Van Tassel dere na Mgbe Kpakpando Na-ele Anya (1976: 140):
Site n'iji nlezianya gụọ Matiu 1: 18-25 nke ọma, o doro anya na Josef ghọrọ di Meri “tupu ha ezukọta” mgbe 'a hụrụ ya ime.' Na Matiu 1:25 o mere ka o doo anya na "Josef amaghị ya." O doro anya na Josef bụ otu nna nna Jizọs. Ọbara Josef adịghị n’ime Jizọs.
Mary bụ otu n’ime ndị nọ na mbara; otu n’ime “nwoke na nwanyị” Chineke kere (Jen. 1:27) tupu ya akwụsị Ọrụ Ya (Jen. 2: 2), na tupu ịta ahụhụ Adam na Iv.
Mary weputara onwe ya maka oru nke iweputa, site na omumu, rue uwa, nwa nwoke nke Adam. Jizọs nakweere ọrụ ahụ tupu ya amata ihe ọ gụnyere.
Enwere nsogbu dị mkpa na amụma ahụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu n'ime Ashtar Command Movement. O yiri ka o doro anya na ozi ndị na-egosi ọbịbịa nke ike ndị agha Ashtar hiere ụzọ. Imirikiti ozi ndị a na-esi na Ashtar gaa na 1950s na 1960s nwere akụkọ zuru ezu banyere ọdịda ala, njikọta nnukwu n'etiti ETs na ụwa, ọrụ nnapụta dị mgbagwoju anya, na ọbụna mwepụ ọtụtụ mmadụ na mbara ala. Mmehie ndị a malitere ịdaba na Ashtar Command Movement, nke bụ isi n'ihi na enweghị ikike etiti iji nyochaa ozi ma ọ bụ gosipụta azịza doro anya iji belata mgbagwoju anya na nhụjuanya nke amụma na-aga n'ihu.
Image # 1: Foto nke George Van Tassel.
Foto # 2: Foto nke "Integratron" n'ihe dịka 2012.
Image # 3: Foto nke Reverend Robert Short.
Foto 4: Foto nke Tuella (Thelma B. Terrill).
Foto # 5: Onyonyo nke Ashtar na Jesus Christ.
Foto # 6: Foto nke Nkume Nkume Giant 1957.
** Ọ gwụla ma edeghị ya ọzọ, a na-ewepụta ihe dị na profaịlụ a site na Helland 2000, 2003a, 2003b
Bishọp, Gregory na Kenn Thomas. 1999. "Na-akpọ ndị bi na: Nnukwu Nkume Nkume." Oge Fortean 118.
George Van Tassel gbara ajụjụ ọnụ 1964. 1964. Nweta site na https://www.youtube.com/watch?v=g7zC–A_mEk na 20 November 2016.
Helland Christopher. 2003a. "Site na Extraterrestrials na Ultraterrestrials: Evolution of the Concept of Ashtar." Pp. 162-78 na UFO Okpukpe . nke Christopher Partridge deziri. London: Ntughari.
Helland, Christopher. 2003b. "Iwu Ashtar." Pp. 497-518 na Akwụkwọ Encyclopedic Source nke UFO Okpukpe , nke James R. Lewis dere. New York: Akwụkwọ Prometheus.
Helland, Christopher. 2000. "Iwu Ashtar." Pp. 37-40 na UFO na omenala a ma ama: Encyclopedia of Contemporary Myth , nke James R. Lewis dere. Santa Barbara: ABC-CLIO.
Magazin Ndụ. 1957. "Oge Nkụzi maka Ndị Na-ahụgharị Uzo," Mee 27.
Tuella. 1985. Ashtar: Tribtụ. Deming, NM: Akwụkwọ Mgbasa Ozi Guardian.
Van Tassel, George. 1976. Mgbe Kpakpando Na-ele Anya. San Diego: Ahịa Azụmaahịa.
Van Tassel, George. 1968. Ihe omuma nke College of Universal Wisdom, Nke 8 (7).
Van Tassel, George. 1957. Ihe omuma nke College of Universal Wisdom, Nke 5 (4).
Van Tassel, George. 1952. M Na-agba Otu ucgbọ Mmiri Na-efe efe. Los Angeles: Oge Ọhụrụ Na-ekwusara.
von Daniken, Erich, 1968. Gbọ ịnyịnya nke Chi? Berkeley na-ekwusara.
Akwụkwọ Van Tassel
Van Tassel, George. 1968. Okpukpe na Sayensị jikọtara. Ndagwurugwu Yucca, California: E bipụtara onwe ya.
Van Tassel, George. 1958. Kansụl nke ọkụ asaa. Ochie: Los Angeles: DeVorss & Co.
Van Tassel, George. 1956. Banye n'Worldwa a na Ọzọ. Ndagwurugwu Yucca, California: E bipụtara onwe ya.
Van Tassel Video Recordings na Ajụjụ Ọnụ
Ajụjụ ọnụ 1964 (Ihe ngosi eji eji eji eme ihe na-abụghị nke azụmahịa na agụmakwụkwọ)
Ihe ndekọ sitere na Giant Rock UFO Mgbakọ
Tuella. 1995. Akwụkwọ Ọhụrụ nke Mkpughe . New Brunswick, NJ: Akwụkwọ Ọhụrụ.
Tuella. 1994. Ashtar: Na-ekpughe ihe nzuzo nzuzo nke ike nke Ìhè na Ozi Ime Mmụọ ha na Earthwa. New Brunswick, NJ: Akwụkwọ Ọhụrụ.
Tuella. 1983. Lord Kuthumi: Ozi ụwa maka afọ iri na-abịanụ. Deming, New Mexico: Akwụkwọ Mgbasa Ozi Guardian.
Tuella. 1982. Mgbapụ Worldwa Projectwa. Deming, New Mexico: Akwụkwọ Mgbasa Ozi Guardian.
Ọrụ ahọpụtara na Ashtar
Blomqvist, Hakan. 2016. Ndụ abụọ nke George Van Tassel. Hakan Blomqvist's Blog. Ọnwa Itolu 6, 2016. http://ufoarchives.blogspot.ca/2016/09/the-two-lives-of-george-w-van-tassel.html
Bishop, Gregory na Thomas, Kenn 1999. "Na-akpọ ndị bi na: Nnukwu Nkume Nkume." Oge Fortean 118.
Gulyas, Aaron John 2013. Ihe ndi ozo na American Zeitgeist: Alien Contact Ta Sine na 1950's. London: McFarland na Companylọ ọrụ.
Kersteller, Todd. 2015. Mgbagwoju anya na Innovation: Religion na American West. Oxford: Wiley na onsmụ.
Short, Robert. 1952. N'ime Kpakpando: Ozi sitere na Extraterrestrials. West Conshohocken, PA: Nkwupụta ebighebi. Weputara ya site na isii Star Publishing 2003.
Stollznow, Karren. 2014. Echiche ,gha Asụsụ, Omimi na Ime Anwansi. Palgrave MacMillan: London.
Tuella. 1995. Akwụkwọ Ọhụrụ nke Mkpughe. New Brunswick, NJ: Akwụkwọ Ọhụrụ.
Tuella. 1983. Lord Kuthumi: Ozi ụwa maka afọ iri na-abịanụ. Deming, NM: Akwụkwọ Mgbasa Ozi Guardian.
Tuella. 1982. Mgbapụ Worldwa Projectwa. Deming, NM: Akwụkwọ Mgbasa Ozi Guardian.
Van Tassel, George. 1976. Mgbe Kpakpando Na-ele Anya. San Diego, CA: Akwukwo Oru ahia.
Van Tassel, George. 1972. Ihe omuma nke College of Universal Wisdom, Nke 9 (9).
Van Tassel, George. 1971. Ihe omuma nke College of Universal Wisdom, Nke 9 (8).
Van Tassel, George. 1969. Ihe omuma nke College of Universal Wisdom, Nke 8 (10).
Van Tassel, George. 1968. Okpukpe na Sayensị jikọtara . Ndagwurugwu Yucca, California: E bipụtara onwe ya.